Home Wararka DFS oo ka codsatay Qaramada Midoobay kordhinta waqtiga joogitaanka AMISOM
DFS oo ka codsatay Qaramada Midoobay kordhinta waqtiga joogitaanka AMISOM
Golaha Amaanka oo meelmarinaya codsiga kaga yimid dowlada federaalka Soomaaliya ayaa waqti kordhin u sameeyay ciidamada Nabad ilaalinta ee AMISOM. Golaha Amaanka ayaa go’aamiyay in AMISOM sii joogi doonta dalka Soomaaliya ilaa bisha Maajo ee sandaka soo socdoa.
AMISOM ayaa haatan gacanta ku haysa amniga qaybo badan oo kamida dalka , gaar ahaan amaanka madaxweyne Farmaajo iyo dhamaan ilaha muhimka ah ee magalaada Muqdisho iyo qaar kamida dowlad goboleedyada dalka.
Waxa jira walal laga qabo in dalka uu gacanta u galo ururka Al Shabaab hadii ay ciidamada AMISOM dalka isaga baxaaan. Ilaa iyo hada ma jiraan ciidamo Qaran oo lagu aamini karo amaanka dalka.